तारे होटल बनाउन बजगाइँद्वारा टुकुचा खोला कब्जा प्रकरण : वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘पैसा खाएँ !’ | Diyopost
काठमाडौं, २४ माघ । काठमाडौं महनगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित टुकुचा खोला कब्जा गरेर निर्माणाधिन तारे होटलको अनुगमनमा सरोकारवाला निकायले उदासिनता देखाएका छन् ।
कालोधनको शंकाष्पद कारोबारमा समलग्न विवादास्पद व्यापारी राजेन्द्र बजगाइँद्वारा निर्माण गरिउको होटल वर्णबासले टुकुचा खोला नै कब्जा गरेको छ ।
गौरीधाराचोकबाट बालुवाटार नपुग्दै पेट्रोल पम्पको ठिक अगाडी निर्माणाधिन भवनले सरकारले बनाएको मापदण्डलाई खुलमखुल्ला लत्याएको छ ।
उक्त मापदण्ड अनुसार पोखरी जलासयको डिलबाट ५ मिटर, कुवा ढुङ्गेधारा, सिमाबाट ४ मिटर, इनारबाट बाहिरी घेराबाट ४ मिटर र कुलोको केन्द्र रेखाबाट ४ मिटर दूरी छोडेर मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजगाइँले भने ४ मिटर छाड्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै टुकुचा खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर होटल निर्माण गरिरहेका छन् ।
यस विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नुअघि दियोपोस्टले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष मोहन विष्टलाई सम्पर्क गरेको थियो । उनले भोली नै अनुगमनका लागि ईन्जिनियर पठाइदिने वचन दिएका थिए । तर, भोलीपल्ट उनले अनुगमन गर्न कोही पठाएनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष मोहन विष्ट
दियोपोस्टले उनले अनुगमन गर्ने वचन दिएको दिनभन्दा भोलीपल्ट अर्थात शुक्रबार उनलाई सम्पर्क गर्दा शुरुमा उनी ओली समुहको जुलुशमा रहेको भन्दै फोन काटे । आमसभा सकिएपछि उनलाई सम्पर्क गर्दा उनले अनुगमन गरिरहनु नपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ‘खोला मिच्न तपाईंको मिलेमतो हो ?’ भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा उनले भने,‘समाचार आइसकेपछि सकियो नी । समाचार आएपछि जाँच गर्न इन्जिनियर पठाउनु के हो र ? समाचार लेखिसकेपछि च्याप्टर सकियो । मोहन विष्टले पैसा खायो भनेर लेखिदिनुस् ।’
आफूलाई पर्यटन व्यावसायी र नेपाली कांग्रेसको नेताको रुपमा चिनाउँदै आएका क्यासिनो व्यावसायी राजेन्द्र बजगाइँले यो भवन निर्माण गरेका हुन् ।
ब्रिटिश भर्जिन आयरल्याण्ड कालोधनको कारोबार हुने पहिलो मुलुक हो । खोला मिचिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन दियोपोस्टले उनलाई यसअघि नै सम्पर्क गरेको थियो । उनले भनेका थिए,‘हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ । नक्सा अनुसार नै निर्माण गरेका हौँ । कसले भन्यो तपाईंलाई ? गएर नापेर हेरे थाहा हुन्छ । हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ । खोला जहाँबाट बग्नुपर्ने हो बगिरहेको छ ।’